A na-emepụta ugbo nduku na-eto eto na Khabarovsk Territory - akwụkwọ akụkọ "Potato System"
A na-emepụta ugbo nduku na-akụ mkpụrụ na mpaghara Khabarovsk
в News, Akụkọ mpaghara, Omume / Etu
Ndị na-emepụta ọrụ ugbo nke Khabarovsk Territory na-enwe mmetụta dị ukwuu maka mkpụrụ nduku mmeputakwa nke ukwuu, ka akụkọ na-akọ. pịa ọrụ nke Rosselkhozcenter.
Na nke a, SHP "Kolos" LLC (Khabarovsk mpaghara) kpebiri na-abịa n'afọ na-amụba ebe nke kere nduku nke elu reproductions maka ire ere na-emepụta ugbo na ndị bi na mpaghara maka mkpụrụ nzube.
N'afọ a, mpaghara ịkụ nduku na Kolos LLC etoola site na 25% wee bụrụ hectare 72, ebe ọkara nke mpaghara a bụ ụdị nduku dị iche iche nke Zekura na Gala.
N'ịtụle ngwa nke SHP Kolos LLC maka asambodo nke a mkpụrụ ugbo, Commission, esịnede ọkachamara si alaka nke Russian Agricultural Center, na mpaghara Ministry of Agriculture, alaka nke Federal State Budgetary Institution Gossortkomissiya, na ọnụnọ nke Ọkachamara si n'ugbo na-gbaara, wee mara na teknuzu na ihe akụrụngwa nke Enterprise, isi maka nhazi na ichekwa poteto.
Ndị òtù kọmitii ahụ nyochara ihe ọkụkụ nke poteto ndị mara mma, ndị ọkachamara nke ugbo ahụ nyere ndụmọdụ maka imeziwanye mmepụta mkpụrụ na ịkụ poteto.
Dabere na nsonaazụ nke ọrụ ahụ, kọmitii ahụ mere mkpebi na nnabata nke ụlọ ọrụ a kwadoro na ihe ndị a chọrọ maka ubi mkpụrụ.
isi: FSBI "Russian Agricultural Center"
Tags: mbubata mbubatanri na ugbo UNRosselkhoztsentrmmepụta mkpụrụ ndukuKhabarovsk Territory
MAFEX-Nduku. Ikpuchido nduku na oria
Mikhail Danilov ghọrọ Onye isi oche ọhụrụ nke Firm "August" JSC